XOG: Madaxtooyada Puntland oo wasiiradeeda ku amartay hortagida baarlamaanka, xili cadaadisyo badan haystaan. -News and information about Somalia
Home Warkii XOG: Madaxtooyada Puntland oo wasiiradeeda ku amartay hortagida baarlamaanka, xili cadaadisyo badan...
XOG: Madaxtooyada Puntland oo wasiiradeeda ku amartay hortagida baarlamaanka, xili cadaadisyo badan haystaan.
Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa ku amray golihiisa Wasiiradda kahor intii uusan ka dhoofin Garoowe labo todobaad ka hor, in ay diyaarsadaan waxyaabaha u qabsoomay mudadii ay xaafiisyada joogeen ee ahayd 10kii bilood ee lasoo dhaafay, taasian waa id kamid ah arrimaha ay Madaxyooyadu doonayso in ay ku qariso dhaliilaha mucaaradkeedu u jeediyaan.
Madaxtooyada Puntland ayaa dhamaadkii bisha October duulaan ku qaaday baarlamaanka, si Gudoonka golaha loo ceyriyo loona fuliyo damaca Xukuumadda, xili isla xisaabtam xoog badan uga imaanayay xagga baarlamaanka.
Xildhibaanada oo ku dhiiranaa in ay la xisaabtamaan Xukuumadda ayaa badankooda hadda hanjabay, waxayna badankood go`aansadeen in ay difaacaan howlaha Xukuumadda oo ay wax badan kaga xiran yihiin.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa Khamiistii lasoo dhaafay ku amray golaha Wasiiradda in ay diyaarsadaan waxqabadkooda oo ay hortagaan baarlamaanka si wax looga weydiiyo, isagoo fulinaya amarkii Madaxweynaha.
Wasiiradda Xukuumadda ayaa qaarkood sheegay in ay diyaar u yihiin in ay hortagaan xildhibaanada oo ay ka jeediyeen wixii uqabsoomay, qaarkoodna waxay welwel ka qabaan su`aalaha fara badan ee uga imaanaya dhinaca xildhibaanada.
Dadka la socda siyaasadda ayaa rumeysan in saluugmada xooga badan ee laga qabo hanaanka Hoggaamined ee Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ay Madaxtooyadu doonayso in ay ku jeediso la xisaabtamka golaha wasiiradda.
Sidaas oo kale bilowga sannadka cusub ee 2020-ka ayay doonaysaa Madaxtooyada in ay isbedel ku sameyso golaha Wasiiradda, waxaana laga eegi doonaa waxqabadka Wasiiradda iyo kuxigeenadooda hadaljedintooda baarlamaanka.
Madaxtooyada ayaa dad kala duwan oo ku dhaliilay waxqabad xumo iyo siyaasadeeda kuwajahan dalka Imaaraatka Carabta ku xirtay magaalada Boosaaso, waxaana ay sheegtay in ay gacan bir ah ku qaban doonto mucaaradka kasoo horjeeda, iyadoo ku jirtay mudo xileedkeedii ugu horeeyey ayay la kulmaysaa mucaarad xoog leh.
Previous articleUhuru Kenyatta oo ka hadlay weerarkii baska ee lagu laayey askarta badan
Next articleJawaari oo banaanka keenay arin halis ah oo ay wadaan Baarlamaanka Dalku
Madaxweynaha Puntland oo cafis u fidiyey maxaabiis
Akhriso Taariikh Nololeedka Gudoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Galmudug
Guddoomiyaha Cusub ee baarlamaanka Galmudug oo la doortay
Agaasimihii Madaxtooyada HirShabelle Ee Isu Dhiibay Al-Shabab Oo Ka Soo Laabtay
Ciidanka Dawlada Oo Arin Farxad Leh Ka Bilaabay Maanta Awdheegle